Shariif Xasan oo heshiisiinaya Biimaal iyo Habargidir – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shariif Xasan oo heshiisiinaya Biimaal iyo Habargidir
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa shir nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelaha Biimaal iyo Habargidir ka furay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Labada beelood ayaa muddo dhow bilood ah ku dagaalamayey deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana dagaaladaasi geysteen kharaase badan.
Shirka uu furay Shariif Xasan Sheekh Aadam oo socon doona 5 maalmood ayaa waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin katirsan dowlada dhexe ee Soomaaliya, mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur galbeed iyo waxgarad ka kala socday dhinacyadii la heshiisiinaayo.
Furitaanka shirkan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose C/qaadir Maxmed Nuur siidii isagoo sheegay in baahi weyn loo qabo dib u heshisiinta dadka wada degan gobolka Shabeelaha Hoose.
Wasiirka Ganacsiga iyo Dekedaha Maamulka Koonfur-galbeed C/laahi Sheekh Xasan ayaa kulanka ka sheegey in ka wasiir ahaan uu diyaar u yahay isla markaana daboolaan baahi kasto oo shacabku ay u qabaan arimaha horumarinta.
Madaxweynaha maamulka Koonfur-galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo shirka si rasmi ah u furay shirka ayaa ku baaqay in dadka walalaha ah ay qaataan nabada iyo dib u heshiisiinta si loo gaaro xasilooni waarta taas oo dan u ah dadka Soomaaliyeed.
Xildhibaan Maxmed Cumar Dalxa oo ku hadlayaay magaca xubnaha Baarlamanka Federaala Soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyaay howlaha dib u heshiisiinta.
Geba gebada shirka ayaa la filayaa in laga soo saaro qodobo lagu dhameynayo colaadii bilihii la soo dhaafay ka taagneyd gobolka Shabeellaha Hoose.
Labada beelood ayaa isku haya arrimo dhul, waxaana beesha Biimaal sheegeysaa iney dhibaato ku qabto beesha Habargidir.
Meydka Xildhibaan Xaabsade oo maanta lagu aasay magaalada Baydhabo
Wafdi ka socda Golaha Xuquuqda Aadanaha Afrika oo gaaray Muqdisho